Bressert အော်တိုထရေးဒင်းနည်းပညာ - အောက်ခြေ - အော်တိုထရေးဒင်းစနစ်များ - အညွှန်းကိန်း - ထရေးဒင်းသင်တန်းများ
အော်တိုထရေးဒင်းစနစ်များ - အညွှန်းကိန်း - ထရေးဒင်းသင်တန်းများ
Bressert ထရေးဒင်းနည်းပညာအကြောင်းကပို ထပ်မံကြည့်ရှုရန်
ဂျရုမ်း Bressert ရဲ့ - အဆိုပါ PowerCLOSE
Walter Bressert’s – ထရေးဒင်း Futures မှ 12 Cardinal အမှား
Walter Bressert’s – ထရေးဒင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ် join စီလအသုံးဝင်သောကုန်သွယ်ဗီဒီယိုများအများကြီးစောင့်ကြည့်
သင်သည်ဤ website တွင်ထုတ်ကုန်မဆိုဝယ်လို့သို့မဟုတ်ငှားရမ်းမတိုင်မီအန္တရာယ်ထုတ်ဖော်ကိုဖတ်ပါ။
မေးခွန်းတစ်ခုကို? / Comment? / Demo? *
မူပိုင် 2016 ။ Bressert ထရေးဒင်းနည်းပညာ - All rights reserved
မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြနေကြပါတယ်တချို့ကအရာများစွာကိုမွေးရာပါန့်အသတ်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမကိုယ်စားပြုမှုမဆိုအကောင့်သို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းအောင်မြင်ရန်ဖွယ်ရှိသည်သို့မဟုတ်ပြသသောသူတို့ကိုရန်အလားတူရှုံးပါလိမ့်မယ်ဒါကလုပ်နေပါသည်; တကယ်တော့, မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒျမြားနှငျ့နောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်အထူးကုန်သွယ် program ကအောင်မြင်အမှန်တကယ်ရလဒ်များကိုအကြားမကြာခဏချွန်ထက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များ၏န့်သတ်ချက်များတစ်ခုမှာသူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်အမှန်အတိုင်းလက်ခံ၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ကုန်သွယ်ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ပါဝင်ပါဘူး, နှင့်မျှမဖြစ်နိုင်ချေကုန်သွယ်စံချိန်အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်၏ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်၏သက်ရောက်မှုများအတွက်လုံးဝအကောင့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒဏျခံနိုင်စွမ်းရှုံးသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်နတေဲ့ကွားထဲမှာအထူးသဖြင့်ကုန်သွယ်အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာဖို့လည်းဆိုးရွားစွာအမှန်တကယ်ကုန်သွယ်ရလဒ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ပစ္စည်းရမှတ်များမှာရှုံးသည်။ Futures နှင့် Forex ကုန်သွယ်သိသိသာသာပါဝင်ပါတယ်: ယေဘုယျအတွက်စျေးကွက်သို့သို့မဟုတ်အပြည့်အဝမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်အဘိတ်များနှင့်ဆိုးရွားသောရလဒ်များကိုအန္တရာယ်ထုတ်ဖော်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်သမျှထဲမှာအဘို့မှတ်မရနိုငျသောမည်သည့် Specific ကုန်သွယ်အစီအစဉ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှ Related မြောက်မြားစွာကိုအခြားအချက်များရှိပါသည် စွန့်စားမှုနှင့်တိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံအလားအလာအားလုံးသို့မဟုတ်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။ စွန့်စားမှုမြို့တော်သူတွေကိုဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ဘဝစတိုင်ထိခိုက်ဘဲဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ သာစွန့်စားမှုမြို့တော်ကုန်သွယ်အတွက်အသုံးပြုရပါမည်နှင့်သူတို့သာလုံလောက်သောအန္တရာယ်မြို့တော်နှင့်အတူကုန်သွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သေချာပေါက်အနာဂတ်ရလဒ်ပြမဟုတ်ပါဘူး။ ထုတ်ဖော်: အာမခံနှင့်ကုန်စည်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသိသိသာသာအန္တရာယ်များကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်အာမခံများရောင်းချမှုနှင့်ဝယ်ယူနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးအန္တရာယ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲဆောင်ရွက်မပေးသင့်ပါဘူး။ အဆိုပါ cycletrader, ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထား profittrader software ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအထောက်အကူပြုဖို့ကိရိယာတခုဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အခါမဆိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဘယ်အရာကိုအသုံးအနှုန်းများအပေါ်, သင်၏ရွေးချယ်မှု၏ညျသငျ့လျြောအဆုံးအဖြတ်ဘို့ဆုံးဖြတ်ဘို့ဝါးတာဝန်ရှိသည်။ အာမခံသို့မဟုတ်ကုန်စည်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်, သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်ပိုက်ဆံပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်အနာဂတ်ရလဒ်များကိုအာမခံချက်မပေးပါဘူး။ ဒီ site ပေါ်တွင် descibed မဆိုကုန်သွယ်မှုစနစ်တကယ်တော့သင်ကမဆိုငွေရှာမရနိုငျနှငျ့သငျအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။